Falsafada iyo Siyaasada arrimaha bulshada | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Posts in category Falsafada iyo Siyaasada arrimaha bulshada
“Ninba maalintiisuu Maandeeq gujaystaa.” Abwaan Feerfeer. Saaxiib, horta qoraalkan ka hor, weligaa ma isweydiisay sababta ay Soomaalidu kol kasta u jeceshahay in uu isbeddalo Xukanka Madaxtooyada? Haddii aad joogto Muqdisho, ama Hargeysa, ama Garoowe ama Dawlad-gobaleedyada kale, abidkaa ma ka fekertay sababta Soomaalida meelahaas kala joogta ay kulli isku calool u yihiin oo uur iyo afba uga wada diidaan in uusan ku soo laaban qofka markaa saaran Kursiga Madaxtooyadaas? Anigu waan iska wareystay, waana helay sababta e, bal xoogaa ila soco. Dhallinyaro badan oo aan isku barannay Xamar, ayaa markii la soo doortay Cabdiqaasin Salaad, waxa aan arkay nimankii oo …
Wareysigii uu muuqbaahiyaha Universal ka qaaday 10-kii bishan Febraayo madaxweynaha Soomaaliya ee Farmaajo, kaas oo dhinacyo badan taabanayay. Qodobada wareysigaas iiga baxay waxa ka mid ahaa, in loo fiirsadana ay mudan tahay. Isaga oo ka hadlaya xasiloonida siyaasadeed iyo dawladnimada, waxa uu ganafka ku dhuftay in xukuumaduhu isbeddelaan. Isaga oo ula jeeda haddii xukuumaddiisu dhacdo in wax walba ay eber ka soo bilaabmayaan. Sidaa darteed ay wanaagsan tahay in hal xukuumadi ay muddo badan dalka hoggaankiisa hayso. Isa qodobkaas mid kale oo la mid ah oo ku saabsanaa dhanka la dagaalanka musuqmaasuqa waxa uu tilmaamay, in wax-ka-qabad la’aanta musuqa ay …
Hordhac: Duqeyda dhaqanka ee kala geddisan oo ay bulshada Soomaalidu muddo aad u badan uu ku dhisnaa hab-maamulkoodu, gumeystihii ka hor iyo ka dib. Waxa ay u noqdeen tiir adag dhismaha nabadda oo horseedda qarandhiska Soomaalida. Dhammaan burburkii ka dib maamulladii la dhisay oo dhan waxa kaalin weyn oo muhiim ah ka qaatay duqeyda dhaqanka. In ay duqeyda dhaqanku kaalin weyn ku yeesheen arrimihii siyaasaddeenna waa dood kale oo aynaan kaga hadlayn maqaalkan, laakiin kaalinta ay ku leeyihiin dhismaha nabadda ee bulshadeenna. Middaas oo horseed u ah had iyo jeeraale in la dhiso qaran nabaddiisu ay fadhido, sal adagna ay leedahay. …